Saturday May 30, 2020 - 09:08:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hay'adda ICRC ayaa si kulul udhaleecaysay falkii wuxuushnimada lahaa ee ciidamo katirsan dowladda Federaalka ay kula kaceen shaqaale caafimaad oo ka shaqeynayay sh/dhexe.
Qoraal kasoo baxay hay'adda ayaa uqornaa sidan:-
Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas (ICRC) wuxuu aad uga argaggaxay dilka sideed ruux oo lagu dilay tuulada Gololey ee degmada Balcad ee Hirshabelle. todoba ka mid ah dadkaasi waxaa la sheegay inay yihiin shaqaale daryeelka caafimaadka ah oo ka shaqeeynayay xarun caafimaad oo ku taala degaanka. ICRC-da waxay si aad ah u cambaareyneysaa rabshadaha noocan oo kale ah ee lagula kaco shaqaalaha caafimaadka.
Juerg Eglin, madaxa Ergada ICRC-da ee Soomaaliya ayaa yiri: "Tani waa masiibo laga naxo. Weerarada noocan oo kale ah ee lagu qaado shaqaalaha caafimaadka waxay wiiqayaan awooda bixinta daryeel caafimaad oo muhiim ah, oo loo fidiyo dadka marka ay sida aadka oo degdega ah ugu baahan yihiin. Quluubteenu waxay la jirtaa qoysaska dhibanayaasha.”
Inta badan, xarumaha daryeelka caafimaadka ee Soomaaliya waa kuwa aanay gaari karin in badan oo ka mid ah bulshada. Kaliya, 15 boqolkiiba dadka ku nool miyiga ayaa lagu qiyaasaa inay heli karaan daryeel caafimaad, taasoo ah caqabad inta badan ay sii cakiraan dilaaca rabshadaha iyo dhibaatooyinka cimilada sida daadadka.
Shaqaalaha caafimaadka, xarumaha caafimaadka iyo gaadiidka sida ambalaasyada waa in la ixtiraamo oo la ilaaliyaa xaalad kasta oo lagu jiro, waana in shaqada shaqaalaha caafimaadka la fududeeyaa waqti kasta. Rabshadaha ka dhanka ah shaqaalaha caafimaadka waxay khatar gelineyaan helitaanka adeegyada caafimaadka iyo kaalmada aadka loogu baahan yahay oo loogu talagalay dadka baahida u qaba. Marka lagu jiro xaaladaha iskahorimaadka hubeysan, sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah ee bani’aadanimmada, dadka aan qeeybta ka aheeyn colaadaha waa in aan la dhibaateeyn marwalba.
Waxii macluumaad dheeri ah, fadlan kala xiriir:
Mohamed Abdikarim, ICRC Somalia, +254770171 756
Crystal Wells, ICRC Nairobi, +254716897265
Kala soco ICRC-da: facebook.com/icrciyotwitter.com/icrc